तिथि मेरो पत्रु » एक सम्बन्धमा फोहर कुरा कसरी
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुलाई. 07 2020 |2मिनेट पढ्न
हामी सबै देखेको युगल चलचित्र मा फोहोर कुरा छ, टिभी र पनि पुस्तकहरूमा पढ्न तर यो पनि काम गर्छ? अनि अधिक महत्वपूर्ण, तपाईं आफ्नो सम्बन्ध मा फोहोर भाषण शुरू गर्नु पर्छ?
लोकप्रिय धारणाको ठीक विपरीत, फोहोर कुरा गर्दा तपाईं इच्छित प्रभाव प्राप्त गर्न बाहिर त्यहाँ अनौठो वा केही भन्न छैन. तल सुझावहरु को पालन गरेर, अझै पनि तपाईं जा रहेको छ जबकि तपाईं आफ्नो सम्बन्ध र यौन जीवन उत्साह थप्न सक्नुहुन्छ.
स्पाइस थप्दै: बस मसला जस्तै खाना पकाउन गर्न स्वाद थप्न, फोहोर कुरा गरेर सम्बन्धमा स्वाद भन्छन्. तथापि, तपाईं पनि धेरै फोहोर भाषणको रूपमा होसियार हुनुपर्छ, अझै पनि धेरै मसला जस्तै, पट्यारलाग्दो प्राप्त हुनेछ र पनि आफ्नो सम्बन्ध बिगार्न सक्छ. उत्तेजना र मजा थप्नका लागि, sparingly यसरी यो प्रयोग गरेर प्रयास यो तपाईं आफ्नो साथी को लागि फोहोर कुरा गर्न रोमाञ्चक र अप्रत्याशित हरेक समय हुनेछ.
सहज रहनुहोस्: सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टिप गर्न र तपाईं संग आराम गर्दै छन् के भन्न छ. यो स्पष्ट या सूक्ष्म होस्, तपाईं त यो भन्दै पनि असजिलो हो भने यो भन्दा संभावना पनि अप्ठ्यारो बज्छ. र पूर्ण इमानदार हुन, अप्ठ्यारो फोहोर भाषण भन्दा झन् खराब केही कुराहरू छन्.
सूक्ष्म हुनुहोस्: स्पष्ट, फोहर, सेक्सी, यो भावुक सेक्स गर्न सक्छ रूपमा र ग्राफिक फोहोर भाषण बेडरूम लागि ठूलो छ. तपाईं सूक्ष्म हो भने तर फोहोर कुरा गर्दा, यो आफ्नो साथी बनाउनुको अलावा मा यौन तनाव सिर्जना रूपमा तपाईं लगातार सोच्नुहोस् बलियो वांछित प्रभाव सिर्जना गर्नेछ पाउनुहुनेछ. सूक्ष्म हुनु, वास्तवमा, फोहोर कुरा गर्दा वास्तवमा स्पष्ट भन्दा बढी शक्तिशाली हुन सक्छ.
सूक्ष्म फोहोर भाषण अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारक तपाईं बस को बारे मा कहीं पनि गर्न सक्छ भन्ने छ. एक पार्टी देखि साथीहरूसँग घुमिरहेको काम मा जा, एक सरल “म तपाईं के गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा मनमा केहि मजा कुराहरू जस्तै म यी अन्य मानिसहरूले वरिपरि थिएनन् इच्छा”, ठ्याक्कै तिम्रो मन मा के बारेमा सोच आफ्नो साथी छोड्छ.
स्पष्ट, बेडरूम भाषण: यस टिप माथि देखि ठीक विपरीत छ, जबकि, ग्राफिक फोहोर भाषण सेक्स hotter बनाउन हुनेछ, अधिक रोमाञ्चक, र अधिक भावुक – ठ्याक्कै के कुनै बेडरूम मा चाहनुहुन्छ. यस चंचल टाढा शब्द स्पष्ट स्टीयर तपाईं नदेऊ, सेक्सी बेडरूम भाषण. बस क्षण पकड र तपाईं जस्तै महसुस के उल्लेख रही “तपाईं मलाई यति राम्रो भित्र महसुस”, मा आफ्नो साथी परिणत हुनेछ मात्र होइन तर राम्रो अहं मालिश हुनेछ. तपाईं अझै पनि भयातुर वा असजिलो महसुस भने, अझ तीव्र “अँ”, “हाँ”, र “हे परमेश्वर” पनि त्यस्तै प्रभाव प्रदान.
Erotica: सायद सजिलो टिप इरोटिका वा रोमान्स उपन्यास पढ्न छ. मात्र तिनीहरूले आफ्नो फोहोर कुरा गरेर प्रदर्शनहरु को सूची विस्तार हुनेछ तर तपाईं परिस्थितिको लागि धेरै सुझाव दिन हुनेछ, भूमिका खेल, र तपाईं छोडेर अलावा लाइनहरु तपाईं एक बाफिलो दृश्य पढिसिध्याएपछि विशेष गरी पछि फर्केर.
तपाईं केही महिना वा दस वर्ष को लागि आफ्नो साथी संग भएको होस्, फोहोर कुरा बलियो र उत्तेजित गर्न सक्छन्, आफ्नो सम्बन्ध को एक नया स्तर जोडने.